Xarunta Dugsiga Sare ee Booliiska ee Scoula Poilizia oo Traffic kala haga ergada oo la diyaariyey – idalenews.com
Ciidamada Nabadgalyada wadooyinka ayaa maanta wadooyinka magaalada Muqdisho kusameeyay kormeer laxiriira isticmaalka gaadidka ee wadooyinka kuheeran goobta uu dhawaan kafurmayo shirka ansixinta dastuurka,
iyagoo gacanta lagu dhigay gaari xamuul ah oo si aad ah uburburiyay mid ka mid ah baalayasha kushaqeeya Soolarka ee ku xiran wadada Makka Al-mukarama.
Taliyaha ciidanka Taraafikda ilaalada Wadooyina Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo hoggaaminayay ciidamada sameynayay kormeerka ayaa sheegay in dhammaan wadooyinka Muqdisho la dhigayo ciidanka ilaalada wadooyinka gaar ahaan goobta lagu qabanayo shir weynaha lagu ansaxinayo dastuurka dalka.
Taliyaha taraafikada wadooyin ayaa intii ku daray in ay gacanta ku dhigeen ciidanka darwalkii waday gaari burburiyay mid ka mid ha leyrarka ku xiran wadada Makka Al-mukarama.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo soo gaaray goobta uu ka dhacay shilka ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda Hoose ka soo saartay sharci ah in gaarigii waxyeelo u geyto baalooyinka ku xiran wadada Makka Al-mukarama ay muteysan doonta ganaax dhan 1.000 Dolar cidii ku bixn weysa lacagtaasna Bil gudaheedna ay dowladda kala wareegeyso Baabuurka.
Sidoo kale afhayeenka ayaa intaa raaciyay in ay horay u sameeyeen wacyi galin ku aadan sidii loo ilaalin lahaa baalooyinka ku xiran wadada Makka Al-mukarama sidaa daraadeedna cidii ku xad gudubta ay marsiin doonaan sharciga ah in ay bixiyaan lacagta ganaax ah.